'' အမြင့်အလိုဆန္ဒ 'သို့မဟုတ်' မျှသာ '' တစ်ဦးစွဲ? သံမဏိ et al မှတစ်ဦးကတုန့်ပြန်။ Porn တွင်သင့်ဦးနှောက် - Donald L. ဟီလ်တန်, ဂျူနီယာ, MD များက
'' အမြင့်အလိုဆန္ဒ 'သို့မဟုတ်' မျှသာ '' တစ်ဦးစွဲ? သံမဏိ et al မှတစ်ဦးကတုန့်ပြန်။ Donald L. ဟီလ်တန်, ဂျူနီယာ, MD များက
မှတ်ချက် YBOP: အောက်ပါတစ်ဦးမှတစ်ဦးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ် EEG လေ့လာမှု (သံမဏိ et al ။ 2013) SPAN Lab မှနေဖြင့်ဇူလိုင်လ, 2013 အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု porn နှင့်လိင်စွဲလမ်း၏သဘောတရားများကိုမှအဓိကစိန်ခေါ်မှုအဖြစ်နီကိုးလ် Prause အားဖြင့်ရာထူးတိုးခဲ့ပါတယ်။ YBOP ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့အချိန်မှာဒီနက်ရှိုင်းစွာချို့ယွင်းချက်လေ့လာမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: SPAN Lab မှမြေပြင်-Breaking အမျှ Empty Porn လေ့လာမှုလမ်းဦးစားပေးသွားမည်။ ကြည့်ပါ - လေ့လာမှုများအရလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒရှိ” သည်ဟုဆိုကြသည်။
Donald အယ်လ်ဟီလ်တန်, Jr. MD*
Neurosurgery ဌာန, San Antonio တွင်, အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတက္ကဆက်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံစင်တာတက္ကသိုလ်
Published: 21 ဖေဖော်ဝါရီလ 2014
ဤသည်ကို (Creative Commons CC-BY 4.0 လိုင်စင်၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေထားတဲ့ Open ကို Access ကိုဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), တတိယပါတီများမှကူးယူပြီးပြန်လည်ဖြန်ဝေပစ္စည်းကိုမဆိုအလတ်စားသို့မဟုတ်ပုံစံနှင့် remix ရန်, အသွင်ပြောင်းနှင့်မဆိုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပစ္စည်းအပျေါမှာတညျဆောကျဖို့ခွင့်ပြုပင်စီးပွားရေးအရ, မူရင်းလက်ရာစနစ်တကျကိုးကားဖြစ်ပါတယ်ပေးအပ်နှင့်၎င်း၏လိုင်စင်ကဖော်ပြသည်။
ကိုးကား: လူမှုဗေဒအာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စိတ်ပညာ ၂၀၁၄၊ ၄း၂၃၈၃၃ - http://dx.doi.org/2014/snp.v4
ကုသထိုကဲ့သို့သော '' တယ်လီဗေးရှင်းစွဲ '' အဖြစ်ရောဂါပြသမှုမရှိဘဲအပြုအမူရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုနာရီအရေအတွက်ကိုလျှော့ချအာရုံစိုက်နှင့်ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။ ဒါကအလားတူချဉ်းကပ်မှုမြင့်မားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြု if အဆိုပြုထားရောဂါမော်ဒယ်မျှသာမြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒထက်ကျော်လွန်။ ရှင်းပြပါဝါကိုမထည့်ပါဘူး (Steele, Staley, Fong, & Prause, 2013)
di Chiara, G. အ, & Imperato, အေ (1988) ။ လူသားများအလွဲသုံးစားပြုသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် mesolimbic ကြွက်များ၏လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားနေသောကြွက်များ၏ synaptic dopamine ပါဝင်မှုကို ဦး စားပေးသည်။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု, 85(14), 5274-5278 ။ ထုတ်ဝေသူအပြည့်အဝစာသား
Draganski, ခ, & မေလ, အေ (2008) ။ လေ့ကျင့်ရေး - သွေးဆောင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ့ ဦး နှောက်အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန, 192(1), 137-142 ။ ထုတ်ဝေသူအပြည့်အဝစာသား
Dunning, JP, Parvaz MA, Hajcak, G. အ, Maloney, တီ, Alia-Klein, N. , Woicik, PA, et al ။ (2011) ။ ကိုကင်းနှင့်အ abstinent နှင့်လက်ရှိကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်စိတ်ခံစားမှုတွေကိုမှလှုံ့ဆော်မှုအာရုံစူးစိုက်မှုကို: တစ်ခုက ERP လေ့လာမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်, 33(9), 1716-1723 ။ PubMed Abstract | PubMed ဗဟိုအပြည့်အဝစာသား | ထုတ်ဝေသူအပြည့်အဝစာသား
Fiorino, DF, & Phillips, AG (1997) ။ နျူကလိယပြောင်းလဲမှုများသည်ကြွက်များတွင် Coolidge Effect အတွင်း dopamine efflux accumbens ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 17(12), 4849-4855 ။ PubMed Abstract
Georgiadis, JR (2012) ။ အဲဒါကိုလုပ်နေတာ ... ရိုင်း? လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းနှောက် cortex ၏အခန်းကဏ္ဍကိုတွင်။ Socioaffective အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စိတ်ပညာ, 2, 17337 ။ ထုတ်ဝေသူအပြည့်အဝစာသား
ဟော့ဖ်မန်း, အိပ်ချ်, & Safron, အေ (2012) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှု၏အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဇာစ်မြစ်များအတွက်မိတ်ဆက်အယ်ဒီတာ့အာဘော်။ Socioaffective အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စိတ်ပညာ, 2, 17415 ။
Liedtke, WB, McKinley, MJ, Walker က, ll, Zhang က, အိပ်ချ်, Pfenning, AR, Drago, ဂျေ, et al ။ (2011) ။ တစ်ဦးဂန္ဗီဇ, ဆိုဒီယမ်အစာစားချင်စိတ်များကမ္ဘာဦးကျမ်းနှင့်ဆန္ဒပြည့် subserving hypothalamic ဗီဇအပြောင်းအလဲများမှစွဲမျိုးဗီဇ၏ဆက်ဆံရေး။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု, 108(30), 12509-12514 ။ ထုတ်ဝေသူအပြည့်အဝစာသား
Pfaus, JG (2010) ။ Dopamine: ကူညီပေးခြင်းအထီးကအနည်းဆုံး 200 သန်းနှစ်ပေါင်း copulate ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ, 124(6), 877-880 ။ PubMed Abstract | ထုတ်ဝေသူအပြည့်အဝစာသား
အိုး, KK, Balfour, ME, Lehman, MN, Richtand, မင်, Yu, L. , & Coolen, LM (2010) ။ သဘာဝဆုလာဘ်နှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်သည့် mesolimbic စနစ်အတွက် Neuroplasticity ။ ဟားဗတ်, 67, 872-879 ။ PubMed Abstract | PubMed ဗဟိုအပြည့်အဝစာသား | ထုတ်ဝေသူအပြည့်အဝစာသား
ဂျွန်၊ ဂျုံးစ်၊ အေ။ ၊ ဘာစတိန်း၊ IL (2002) ။ ဆားအစာစားချင်စိတ်ကို induction ကနျူးကလိယတွင် dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ကိုပြောင်းလဲပေးပြီးကြွက်များအား amphetamine သို့ပြောင်းလဲစေပါသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 22(11), RC225: 1-5 ။
သံမဏိ, VR, Staley, C တို့, Fong က, တီ, & Prause, N. (2013) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသည် hypersexuality မဟုတ်ဘဲလိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များမှရရှိသော neurophysiological response များနှင့်ဆက်စပ်သည်။ Socioaffective အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စိတ်ပညာ, 3, 20770 ။ ထုတ်ဝေသူအပြည့်အဝစာသား
ဆောင်းရာသီ, ဂျေ, Christoff, K. , & Gorzalka, BB (2010) ။ စည်းကမ်းတင်းကျပ်သောလိင်နှင့်မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒ - ထူးခြားသောတည်ဆောက်မှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 39(5), 1029-1043 ။ PubMed Abstract | ထုတ်ဝေသူအပြည့်အဝစာသား
Zatorre, RJ, Field, RD, & Johansen-Berg, အိပ်ချ် (2012) ။ မီးခိုးရောင်နှင့်အဖြူရောင်ရှိပလပ်စတစ်: သင်ယူစဉ်အတွင်း ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံတွင် Neurimaging ပြောင်းလဲမှုများ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ, 15, 528-536 ။ PubMed Abstract | PubMed ဗဟိုအပြည့်အဝစာသား | ထုတ်ဝေသူအပြည့်အဝစာသား
*Donald အယ်လ်ဟီလ်တန် 4410 ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Drive ကို